Uphuhliso lweMveliso- Chapman Technology Co., Ltd.
Kwi UMenzi weChapman, Siyaluqonda ukhuphiswano lobuso beqabane lethu kwishishini kumashishini amaninzi. Oogxa bethu kwezamashishini babala kwiqela lethu lobunjineli elinamava phantse iminyaka engamashumi amahlanu ukuxhasa izibonelelo zabo zokhuphiswano.
Sijolise kunxibelelwano oluqhubekayo kuyo yonke inkqubo, kubandakanya nenqanaba loyilo, ukuqinisekisa impumelelo yesicelo seqabane lethu kwishishini. UMlawuli weNkqubo ozinikeleyo wabelwe iprojekthi nganye. Ngokusebenzisa izimvo zamaqabane, iqela lethu lobuchwephesha linokubonelela ngoyilo kunye nophuhliso lwesakhiwo sonke semveliso kunye nenkqubo yokwenza isicelo. Oku kuqinisekisa amaqabane ethu kwelona nqanaba liphezulu lomgangatho, ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza kwendleko kwinto nganye eyenziweyo.
Iqela lethu likholelwa ukuba onke amanqanaba kuphuhliso nakwimveliso yesicelo abalulekile. Sisebenza ngokusondeleyo namaqabane ethu eshishini ukuqinisekisa impumelelo kwinqanaba ngalinye. Ukujonga kwethu kuphuhliso lwemveliso, uyilo lokuvelisa kunye nokusetyenziswa kokuhamba komngundo ukuhlalutya nokwenza izindululo zoyilo kubonelela ngamaqabane ethu oshishino ngokhuphiswano kwasekuqaleni.
Nokuba leliphi inqanaba okulo ngexesha lokuphuhliswa kwemveliso iqela lethu likulungele ukunceda nokwenza izindululo kuyilo lwakho ukunciphisa ukubumba kunye neendleko zenkonzo yesibini.
Sisebenze nabathengi ukuphuhlisa iimveliso kwezinye zezi ndawo zilandelayo:
1. Ezemidlalo nangaphandle
2. Ukuhamba / ukufikeleleka
3. Impilo / Impilo
4. Izixhobo zoshishino
5. Oomatshini Bemizi-mveliso
Inyathelo lokuqala: Umbono-Iprojekthi iqala ngombono wakho wemveliso. Masikuncede uchaze ukusebenza kwayo okubalulekileyo kwaye ubone indlela eya kusebenza kakuhle kwintengiso yakho ekujolise kuyo. Siza kuphinda silinganise kwaye siqwalasele ukuvavanya iipropathi ezikhoyo ezikhoyo.
Inyathelo lesibini: Uphando oluneenkcukacha- Ngelixa sichonga isazisi semveliso entsha, iqela lethu lentengiso kufuneka lenze uphando kwimakethi ukuqinisekisa ukuba imveliso yethu iyahlangabezana nokubekwa kwindawo yentengiso kunye neemfuno zentengiso. Ngokweziphumo zohlalutyo lwethu lweemarike, siya kukwandisa kwaye siphucule ubume bemveliso, imisebenzi, kwaye sivumele iimveliso zethu ukuba zingene kwintengiso ngokukhawuleza.
Inyathelo lesithathu:Uyilo -Ukwenza eyona mveliso ibalaseleyo kwimodeli yeshishini lakho, kuya kufuneka sisebenzise uyilo-lokwenza-imveliso (DFM) indlela yokwenza ukuze imveliso ikwazi ukusebenza ngokufanelekileyo. Iikhonsepthi zenzeka kwiinkqubo zethu ze-3D, kwaye sinokuthatha izigqibo malunga neempawu, ifom yefomathi, kunye nezixhobo. Siza kuvumelana kweyona ndlela isengqiqweni eya phambili kwimveliso yakho ngaphambi kokuqhubela phambili kwinqanaba lokwakha.
Inyathelo lesine:Iprototype-Kwiziko lethu elixhotyiswe ngokupheleleyo, sinokusika, ukusila, ukwenza izinto, ukuprinta kwe-3D, ucingo, kunye nenkqubo nganye kunye necandelo ngaphambi kokuhlanganisa iprototype yakho. Isigaba seprototyping sinokuphinda njengoko uyilo olwahlukileyo luqwalaselwa kwaye kuvavanywa.
Inyathelo lesihlanu:Ukwenziwa kwemveliso-Njengeengcali kwimveliso, oomatshini abazisebenzelayo, kunye neenkqubo zeshishini, sikunceda uyile imveliso yakho ngokukala engqondweni ukuze usebenzise amathuba okonga ezantsi kwendlela. Amandla ethu ngaphakathi endlwini asivumela ukuba sizalisekise imveliso ethile ebalekayo.
Inyathelo lesithandathu:Ukuhanjiswa-Isizukulwana sokuqala semveliso yakho sikulungele ukuthengiswa kunye nentengiso. Uya kuba nephakheji yoyilo epheleleyo, iiprototypes, kunye nokubaleka okuncinci kwisitokhwe. Kananjalo uya kuba nenkxaso yethu njengoko uhamba amanyathelo alandelayo.
Kubalulekile ukuvavanya imeko yeshishini kunye "nexabiso leshishini" xa usenza imveliso. Iqela lethu liyakukunceda ngokufihlakeleyo ukuba uvavanye ukwenzeka ngokukhawuleza kwaye likukhokele kuhlalutyo lwengxaki ingxaki yakho ejonge ukusombulula.